UAgence Poplidays unezimvo eziyi-1949 zezinye iindawo.
Embindini wefama kwaye kufutshane nendalo, uya kufumana ukuzola kwelizwe laseMayenne. Ukuhlala ngoxolo kukulindile kule gite ibonelela ngombono othandekayo wedlelo kunye nezilwanyana zayo. Unokonwabela isidlo sasemini esinoxolo ngaphandle kwi-terrace yangasese. Apha, i-vis-à-vis ngqo ... kunye neenkomo, ukusuka kwifestile yekhitshi okanye ejongene nefestile enkulu yebhayi kwigumbi lokuhlala. Umgangatho ophezulu ligumbi lokuhlambela elineshawa kunye nebhafu, kunye namagumbi okulala amabini aneebhedi ezi-5 ezingamawele angama-90x200 onokuthi, ngokweemfuno zakho, uzidibanise ukuze ufumane ibhedi enkulu. I-sofa eguqukayo kwigumbi lokuhlala inika ibhedi eyongezelelweyo kubantu aba-2. Amaphepha akhona. Ukucoca kunokuzikhethela phakathi kwe-50 kunye ne-75 €. Umbane kufuneka uhlawulwe kumnini, ngokufunda imitha. Le cottage ixhotyiswe ngomabonwakude, uxhumano lwe-intanethi, i-barbecue kunye nomatshini wokuhlamba. Ukuba idityaniswe ne-gite yesibini enebhedi ezi-6 (H53G019113), indawo ikwanendawo yokuhlala nabahlobo. Kufuneka wenze ntoni kufutshane? I-Cossé-le-Vivien ingamasango e-Anjou kunye ne-Ile et Vilaine, i-11km ukusuka eCraon, kunye ne-23km ukusuka eChâteau-Gontier. Idolophu ibonelela ngazo zonke iivenkile eziyimfuneko. Umzobi odumileyo uRobert Tatin wahlala eCossé-le-Vivien ekupheleni komsebenzi wakhe kwaye wenza ipaki enkulu, ngoku esele iyimyuziyam ebalulekileyo enemifanekiso yayo eqingqiweyo. Kulo mazantsi eMayenne, uya kufumana iindawo zokuzonwabisa ezifana ne-Odyssée de Craon (enedama lokuqubha likawonke-wonke, i-hammam, i-sauna, isilayidi, izifundo zokuqubha kuyo yonke iminyaka, njl.njl.), okanye iziko lokuzonwabisa laseRicerie (elinolwandle, i-swin-golf , imisebenzi yolwandle efana ne-wake park, njl.). Izilwanyana ezamkelweyo.
Izimvo eziyi-1 950